Peppermint 8, iyo yakareruka distro yezvose, yave kuwanikwa kune wese munhu | Linux Vakapindwa muropa
Kune akawanda akaparadzirwa mwenje, asi kana zvasvika pakushanda navo, vashoma chete ndivo vanonunurwa uye vanoshandiswa zvisinei nekuvapo kwevamwe vakareruka zvinoenderana nezvinyorwa. Peppermint ndeimwe yeanopatsanurwa mwenje kunyangwe isiri yakanyanya kureruka, ndiyo inonyanya kushandiswa.
Peppermint 8 ndiyo yekupedzisira vhezheni yeshanduro iyi. Iyo vhezheni iyo yakavakirwa paUbuntu, paUbuntu 16.04.2 asi iyo iine zvimwe zvinowedzerwa uye zvigadziriso zvinoita kuti igove kugovera kwakapfava uchienzaniswa nemamwe emahara Ubuntu flavour.
MATE ndiyo default desktop yePeppermint 8 Asi hazviuye neese MATE kana Ubuntu zvinoshandiswa, asi vagadziri vayo vakasarudza yakanakisa uye yakaipa yesoftware yega yega kubatanidza zvese muPeppermint.
Semuyenzaniso, Firefox yabviswa uye yakatsiviwa neChromium, saka vashandisi vanoenderera mberi vaine mwenje unowanika pasina kuda kuita shanduko muwebhusaiti. Linux Mint's X-Edhiyo uye XViewer Image ichatsiva iyo Pen uye Gnome Ziso zvirongwa izvo zvekare shanduro dzePeppermint dzaive nadzo.
Asi iri Ice, dandemutande rewebhu rine kugovera uko kwachinja zvakanyanya uye chinhu chakakosha pamusoro pekugovera. Peppermint 8 inoshanda zvakafanana neChannel OSMune mamwe mazwi, maapplication mazhinji anomhanya pane server server uye kwete pakombuta yemutengi. Izvi zvinoreva kuti makomputa mazhinji ekushandisa-mashoma ane simba rakawanda rekuita mabasa ezuva nezuva sekutamba mavhidhiyo, kubhurawuza webhu, kana kugadzirisa zvinyorwa.
Iko shanduko kune iyo vhezheni mune yakazara ruzivo inogona kuwanikwa mu iyo yepamutemo webhusaiti. Zvakare, mu peji rekurodha pasi yePeppermint iwe uchawana iyo yekumisikidza ISO mufananidzo weiyi nyowani vhezheni.
Peppermint 8 iguru vhezheni uye vhezheni iyo inogadzirisa madhigi mazhinji nematambudziko mukugovera pamwe nekuvandudza software yekutanga. Asi ruzivo rwevashandisi runoramba rwakafanana uye rwunofanirwa kuedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Peppermint 8, iyo yakareruka distro yezvose, yave kuwanikwa kune wese munhu
Iko hakuna nzira yekuita yangu Linux Mint kunyorera kumhanya kuseva-parutivi panzvimbo yemutengi-parutivi kuti ndigone kuigadzira isingaremi saPepermint?
Rarama kwenguva yeChipiri Republic Project! akadaro
Iwe unotora musoro wenyaya "Peppermint 8, iyo isina kureruka distro yezvose, yave kuwanikwa kune wese munhu." Asi iwe wobva wati: "Peppermint ndechimwe chezvinhu zvinogovera mwenje izvo kunyangwe zvisiri zvishoma". Vakanga vari?
Ini ndinokuudza neakanaka vibes: usati wanyora chinyorwa, zvizivise iwe zviri nani pamusoro penyaya. Usanyore kunyora. Watozviita benzi iwe neiyo WannaCry chinhu.
Rakareruka uye "basa-rinoshamwaridzika" marongero akawanda. Handizive kuti wawana kupi kuti iyi Peppermint 8 ndiyo yakanyanya kushandiswa. Zvingave zvinobatsira kana iwe ukaita nharo nezvakapihwa pane kugadzira.
Pindura Kureba Urarame Chechipiri Republic Project!
Peppermint OS Minimum Zvinodiwa:
* Processor yakavakirwa paIntel x86, x86_64 kana amd64 kuvaka
* 512 MB ye RAM
* Angangoita 3.8 GB yeinowanikwa disk nzvimbo
Kana icho chisiri chiedza chako nhasi, ndiudze chiri chiedza
Julius bello akadaro
Inogona kuiswa pane Raspberry PI Zero ??
Pindura kuna Julio Bello
Asi chii chakashata mania nekuzvidza basa revamwe kana zvikaitwa nekutenda kwakanaka kwese pasi, saka nyika iri pachena. Kune rimwe divi iwe (Rarama hupenyu hweChipiri Republic Project), uri ani wevaya vanoburitsa maroketi kumwedzi zuva rega rega, huya yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatat kushandira chinyararire vanhu vasingabatsiri vachiedza kuzivisa vanhu. Nenzira, ini handisi shamwari uye handizive munhu akanyora chinyorwa, asi ini ndiri kune imwechete nhamba yeinjiniya munyika.
Zvakanaka, hapana, kukwazisa uye kurarama kwenguva refu GNU / LINUX
Unogona kuva nekutenda kwakanaka, asi kune zvekare chimwe chinhu chinonzi basa. Kana mumwe munhu achinyora munhau iyo inoda kuzivisa nharaunda, ivo vanofanirwa kuziva nezvazvo. Panyaya yeWannaCry, mupepeti mumwe chete uyu akaburitsa pachena kuti hapana chaainzwisisa, izvo zvaisazove dambudziko hombe kana akasatenderedza zvikanganiso zvake kuvaverengi vasingazive nezvenyaya iyi asi vari kutsvaga ruzivo pamapeji akafanana ichi.
Ini handina zano rekuti Joaquín García ndiani uye ini handina chinangwa chekuzvidza chero munhu. Kutendeseka, iko kutaura kubva pakutanga kwakaitwa nevavariro yakanaka kune mupepeti. Dzimwe nguva kurohwa pachiwoko kana kumutswa-kwesha kunouya zvinobatsira.
Mukomana ari kuzvishora nekupokana kwake kusingaperi, kushomeka kwezvaanowana (izvo munyori wenhoroondo anofanirwa kuziva mabatiro azvinoita) uye zvinyorwa zvake zvinoita sekushambadza nepasirose uye zvinokonzeresa kusahadzika pane izvo zvinonzi "zvisingabatsiri" zvaunotaura.
Nezve mamwe makomendi ako, ndinofunga apera uye haakodzeri kupindurwa.
Ndakamira kutenda mukugoverwa kwechiedza pandakaona kuti havana kana maapplication avo uye iwe unofanirwa kurodha maraibhurari kumucheto kwebhaketi uye zvese zvinopedzisira zvave kunonoka uye zvinorema
Izvo kuti zvive chiedza ivo vanongofanirwa kuve nemaapplication, asi ivo vanozove sei chiedza? Kana iwe uchida kuve neanoshanda system nezvose: makumi matanhatu ekunyorera uye makumi maviri mitambo, uchafanirwa kurodha mumaraibhurari mazhinji
Kana iwe uchida kuti dhongi riende kure, haugoni kuitakura here?
Ivo havafanirwe kutaura zvakaipa nezve chero munhu asi kana zvichidikanwa kuti ivo vane masosi kana yavo pachavo yakaratidza ruzivo